प्रेस स्वतन्त्रता | Martech Zone
सोमबार, जनवरी 29, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यस हप्ता वेबको सम्बन्धमा रोचक छ। म पूँजीवाद र स्वतन्त्रता दुवैमा दृढ विश्वास गर्दछु। तिनीहरू होशियारी स्केलका दुई पक्षहरू हुन्। स्वतन्त्रता बिना, धनीले शासन गर्नेछन्। पूंजीवाद बिना, तपाईंसँग कहिले पनि सम्पत्तीको अवसर हुँदैन।
संविधानको पहिलो संशोधन: कांग्रेसले धर्मको स्थापना वा स्वतन्त्र अभ्यासलाई निषेध गर्ने कानुन बनाउँदैन; वा भाषण स्वतन्त्रता को संक्षेप, वा प्रेस को; वा जनताको अधिकार शान्तिपूर्वक भेला हुने र गुनासाहरूको समाधानका लागि सरकारलाई निवेदन दिन।
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि जब यो संविधान लेखिएको थियो, "प्रेस" चीप ट्याग नागरिकहरु को एक समूह थिए जो प्राथमिक प्रेस थिए। ती विशाल कर्पोरेसनहरू थिएनन् जुन सर्वशक्तिमान विज्ञापन डलरले नेतृत्व गरेका थिए आजकल जस्तो छ। त्यो "अखबार" प्रायः एक विचित्र, एउटै पाना थियो जसले सरकारलाई हप्कायो। सब भन्दा पुरानो अखबार, हार्टफोर्ड कुरान्ट, थोमस जेफरसनले पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ... र उनी हराए।
परिचित ध्वनि? यो हुनु पर्छ। यो धेरै भएको जस्तै छ, भन्नुहोस्, एक वेबसाइट वा ब्लग। यो अर्को "प्रेस" हो र एक साधारण ब्लग पोष्ट प्राय: हाम्रो अखबारले हाम्रो महान देशको पहिलो वर्षहरूमा गरेको जस्तो देखिन्छ। संगठनहरू जस्तै इलेक्ट्रोनिक फ्रंटियर फाउन्डेशन निश्चित गर्नुहोस् कि ती स्वतन्त्रताहरू सुरक्षित रहनको लागि। EFF वेबसाइटमा एक नजर राख्नुहोस् र तपाईले साना केटालाई छान्ने प्रयास गर्दै ठूला व्यवसायका दर्जनौं उदाहरणहरू फेला पार्नुहुनेछ।
पैसा प्रवाह पछि, कहानी परिवर्तन हुँदैन? एनबीसी रिपोर्टरहरू विज्ञापनकर्ताको साथ जम्पिंग जेटमा फेला परेको छ, चासोको विवाद हो। सians्गीतकारहरू कसैलाई आफ्नो कलाको सराहना गर्ने दिनहरू बिर्सन्छन्, र तिनीहरूले फर्कन्छन् RIAA लाखौं होर्डर राख्न जारी राख्न लड्न ताकि क्रिस्टल बग्न सक्छ र अर्को बिलिंग खरीद गर्न सकिन्छ। र वेबसाइटहरू र इन्टरनेट कम्पनीहरू जसले लाखौं बनाउँदछन् कि तिनीहरूले एकल हिट, एकल रूपान्तरणको साथ सुरू गरे।
यो हप्ता रमाइलो छ। मैले हेरें जब रोबर्ट स्कोबलले स्ट्यान्ड लिएका थिए, कहिलेकाँही अलि कडा, वेबमा क्रेडिट छ कि भनेर डेटि। गर्नका लागि। रबर्ट आफैले पनि जाँच्दछन् र अलि बढी होब्निंग गर्न र आफू कहाँ सुरु भएको बिर्सिए भनेर स्वीकार गर्दछन्। यो देखेर खुसी लाग्यो।
म पनि GoDaddy एक ठूलो कम्पनी को whim मा आफ्नो ग्राहकहरु को एक मा काटिएको र काटिएको देखे। कुनै Go GoDaddy छ कि पनी छैन कहिल्यै ठूलो ग्राहकको साथ यो गर्नुभयो। यद्यपि उनीहरूले जोखिमको तौल गरे, र पत्ता लगाए कि उनीहरूले आफ्नो पाखुरामा केवल एउटा लामखुट्टे झिक्दै थिए। समस्या यो थियो कि तिनीहरूले गलत लामखुट्टे क्लिक गरे। अब तिनीहरूसँग NoDaddy सँग डिल गर्न छ। (पूर्ण खुलासा: मैले आज राती NoDaddy साइटमा लोगो बनाएँ।)
गुगल अब स्वीकार्छ उनीहरूले आफ्नो खोज इञ्जिनको सेन्सर गरिएको संस्करणको साथ चीनमा व्यापार खोल्नमा गल्ती गरे। अति उत्तम। मलाई खुशी छ उनीहरूले बुझे कि यो कसरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने उत्पीडनमा समयको हात फिर्ता हुन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको लागि धन्यवाद! र ईन्टरनेटको स्वतन्त्रताको लागि धन्यवाद!
हामी दा सुपा बाउलमा जान्छौं!